Gumiin Dargaggoota Tigraay Mekeleetti Geggeessame
Gumiin dargaggoota Tograay inni 9ffaan maqalee keessatti gaggeeffamaa jira.
Sirna banaiinsa Gumii kanaa irratti kana rgaman itti aanaa bulchaan bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Debretsion Gebre Mikaa’eel /dargaggonni Tigraay nageenya naannoo isaanii eegsisuuf gumaacha godhan galata dhiyeessan.
Ijaarsa nagaa dimokraasii fi misooma Itiyoophiyaa irra gaaddisuun balaa irra buufateera jechuu dhaan dura taaaan boordii dargaggoota Tigraay beeksiseera. Obbo Teklaay G/Medin gumii waldaa dargaggoota 9ffaa kan naannoo sanaa irratti haasaa dhageessiseen dargaggoonni Tigraay murtii bu’a qabeessa jedhan dabarsuun akka irraa eegamu yaadachiiseera.
Nagaan Itiyoophiyaa fi Eertraa gidduutti uumame dargaggoota biyyoota lamaniif bu’aa guddaa qabaachuu isaa kan dubbate dura taa’aa kan ta’e obbo Teklaay, mootummoonni lamaan sochiin hariiroo nageenyaa fi sochiin jiru ka waarinsaa akka ta’u akka hojjetan gaafateera.
Dhlattoonni Tigraay gara Asmaraa dhaqanii, kanneen Eertraas gara Meqelee dhufanii ammas tokko ta’uu keenya kan mul’isu jaalalaa fi walii yaaduu dha kan nuti argine. Humni ta’e addaan nu baasuu hin danda’u yaada jedhutu calaqqisaa jira jedhe.